जुन विधेयक आएपनि किन भइरहेछ विरोध ? | Everest Times UK
सामान्यत: अहिलेको सरकारले ल्याएका नीति, नियम, कानुन होस वा अन्य कार्यक्रम । विरोध नहुनुपर्ने हो । तर, जे काम गरेपनि जनस्तरमै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसको संकेत के हो ? सरकार जनविरोधी गतिविधि गरिरहेका
छन् ? होइन भने किन एकपछि अर्का विरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ? विरोधका लागि विरोध पक्कै होइन होला । विरोध भएका गतिविधिहरुमा सरकारले गल्ती स्वीकार पनि गरेको छ । त्यसैले दुई तिहाईको मतको सरकारले सही सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्ला दिनमा आएका केही विधेयकको चर्चा व्यापक छ । मिडिया विधेयक त पत्रकारहरुकै सवाल भएकाले पनि व्यापक विरोध हुने नै भयो । पत्रकारहरुले मिडिया विधेयक पत्रकारका लागि सह्य नहुने भन्दै सडकसम्म नै गएर विरोध जनाए । जसका कारण पनि विधेयक निल्नु न अकोल्नुको हालतमा छ । त्यस्तै, गुठीसम्वन्धी विधेयकले काठमाडौंका नेवार समुदायलाई नै जुरुक्कै उठाएको छ । गुठीको जग्गा दलालहरुको हातमा पुर्याउनका लागि यस्तो विधेयक अगाडि सारेको भन्दै गुठियार र सरोकारवालाहरुले चर्को विरोध गरिरहेको छ । विरोधका कारण संसदसमेत अवरुद्ध हुने स्थिति आएको छ ।
सरकारले पूर्ववत: रुपमा कुनै परामर्श नगर्ने, सरोकारवालालाई पूरापुर बेवास्ता गर्नाले पनि सबैका सबै विधेयकमा सडकसम्मै विरोध भइरहेको छ । यसले सरकारको लोकप्रियतामा गम्भीर धक्का पुगिरहेको छ । सरकार विकासका बारेमा बहस भन्दा पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकका बारेमा प्रतिकार गर्नमै व्यस्त रहनुपरेको छ ।
दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । यो सरकार नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विरलै बन्ने सरकार हो । यो सरकारका सामु धेरै अवसर छन् । तर, चुनौति पनि । यी चुनौतीका बीचमा सरकारबाट जनअपेक्षा चुलिँदो छ । किनकि यो सरकार बन्नुअघि नै नेकपाले भनेकै थियो, दुई तिहाईको जनमत दिनुस्, जनताका तमाम समस्या समाधान गर्नेछौं । तर, अहिले जनताका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । जनअपेक्षा पूरा हुन नसक्दा जनता निरास छन् ।
नेकपाका नेताहरु अहिले पनि गाँड कोराकोर गरिरहेका छन् । आआफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नमा व्यस्त छन् । नेपाली कांग्रेसले जनतासामु कम्युनिष्टले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश पूराकापूर दिइरहेको छ । त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने ल्याकत यो दुइ तिहाईको सरकारले गरिरहेको छैन । सरकारले गरेको कामको विरोध जनस्तरबाटै हुनुमा यो सरकारको दम्भ र घमण्ड प्रमुख कारण हो । त्यसैले जनस्तरबाटै यसको विरोध भइरहेको छ । जुन यो सरकारका लागि अफावसिद्द हुनेछ ।